Fanontaniana 101… Mpanjifa, politika, mahatsikaiky ary Starbucks | Martech Zone
Fanontaniana 101… Mpanjifa, politika, mahatsikaiky ary Starbucks
Alarobia 16, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Andro fialantsasatra aho androany (nilaiko izany!). Namaky tamin'ny bilaogy hafa aho fa maro ny olona no mikaroka ny "101". Ka… toy ny mahazatra dia mizaha toetra ny teôlika aho mba hahitako hoe inona ny valiny. Gaga aho fa mora tamiko ny nahita ireo, misy zavatra maro eto amin'izao tontolo izao, amin'ny asa aman-draharaha, ary eto amin'ity firenena ity izay mahalasa adala ahy. Mazava ho azy, angamba izaho irery io. Aza misalasala mametraka ny fanontanianao na mamaly ny ahy amin'ny fanehoan-kevitra.
Fa maninona no tsy Starbucks no manao bara sôkôla? (Hevitry ny zanako vavy 12 taona!)
Maninona ianao no mila entana 15 farafahakeliny ho an'ny Express Lane? Maninona raha sarety feno 1 farafahakeliny? Izaho no bandy mandany ny vola rehetra!
Fa maninona no ratsy be ny salady ao anaty kitapo?
Fa maninona no tsy maninona ny banky dia manefy $ 30 ho an'ny mahantra amin'ny vidiny $ 1 nefa tsy hanome azy ireo kara-trosa ambony?
Maninona ny banky no afaka mamoaka ny volako eo noho eo, amin'ny fizahana hosoratako nefa izy ireo dia mitazona 5 andro amin'ny seky apetrakao?
Raha afaka mahazo karatra SD 2Gb aho, ahoana no tsy ahafahanao mametraka 500 amin'ireo ary omeo karatra 1Tb aho fa tsy kapila mafy miaraka amin'ireo faritra mihetsika izay tsy mahomby?
Raha tsy mitsiriritra ny indostrian'ny mozika dia ahoana no andaniany vola an-taonina amin'ny fandrian-jaza, bling, dub, grills sns?
Raha afaka mihaino CD aho, tsy midika ve izany fa ho afaka mandrakitra izany foana aho?
Fa maninona ny fivarotana lehibe no mamaha ny entana rehetra ao amin'ny talantalana ary avy eo tsy maintsy manangona entana ao anaty harona indray? Tsy misy fomba mahomby kokoa ve?
Nahoana no fanagadrana mandra-pahafaty matetika ny fanamelohana ho faty, ary tena 20 taona ny fanagadrana mandra-pahafatiny?
Fa maninona ny olona rehetra no miteny hoe "Fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana" nefa tsy ao amin'ny Lalàm-panorenana na ny Fanambarana ny fahaleovan-tena?
Fa maninona aho no mandoa saram-pianarana ho an'ny sekolim-panjakana zanako? Noheveriko fa nandoa hetra izahay amin'izany.
Fa maninona no tsy maninona ny governemanta manandrana manova lalàna momba ny fiainana manokana amin'ny fiarovana ny fahalalahana?
Fa maninona no antoko lehibe 2 ihany no any Etazonia?
Fa maninona no tsy mora vidy kokoa ny fitsaboana amin'ny olona tsy mampiasa azy?
Fa maninona no mora vidy kokoa noho ny akanjon'ny lehilahy ny akanjo ana-behivavy?
Fa maninona isika no mihaino consultant izay tsy fantatsika nefa indraindray tsy ny mpanjifantsika na ny mpiasantsika rehefa miteny zavatra mitovy izy ireo?
Ahoana no avela hanoratan'ny mpanao politika ny lalàny manokana momba izay mety na tsy mety?
Ahoana ny fisotroan-dronono ataon'ny mpanao politika alohan'ny hahafahan'ny olona ao amin'ny tafika?
Ahoana no tsy ahazoantsika mifidy amin'ny fampiakarana ho an'ny mpanao politika?
Raha mila mandray SAT ny zanako vao hiditra amin'ny oniversite, ahoana no tsy tokony hijerenan'ny mpanao politika vao miditra amin'ny birao?
Fa maninona no ny rano mivoaka avy ao amin'ny paompy no manala ny volo, ny fidiovana ary ny fandroana?
Fa maninona ny olona no mieritreritra fa ny fiara maintso no vahaolana, rehefa ampidiriny ao anaty fitoeran-jiro misy herinaratra azo avy amin'ny arina sy ny angovo nokleary?
Fa maninona no tsy maninona ny manana rig menaka ao an-tokotanin'ny tsirairay any Texas, fa tsy any Alaska izay tsy misy olona mipetraka?
Fa maninona isika no manana sheriff, polisim-panjakana ary polisy ao an-toerana mitovy?
Raha firenena afaka izany, maninona ny olona no tsy mahazo manao zava-mahadomelina?
Fa maninona no tsy ara-dalàna ny filokana raha tsy ny loteria no ataon'ny governemanta?
Fa maninona no lafo kokoa ny voankazo noho ny poti-ovy? Heck, maniry eny ambonin'ny hazo izy!
Fa maninona no tsy ara-dalàna ny famandrihana sy ny fanafody? levitra dia zava-mahadomelina.
Fa maninona no tsy afaka mifindra any amin'ny rafitra metrika i Etazonia? Mora kokoa ny mizara sy mampitombo am-polony!
Fa maninona no tsy ao anaty lisitry ny mpivarotra ao New York Times ny Baiboly?
Fa maninona ny ankamaroan'ny mozika kristianina no minono?
Fa maninona no lafo vidy amin'ny teatra ny vatomamy sy popoka? Handeha matetika kokoa aho raha tsy… ary angamba handany vola bebe kokoa.
Fa maninona ny magazay no manana zotram-pisavana be dia be nefa mihidy ny ankamaroany?
Fa maninona no antenainao handoa vola ny olona raha omenao maimaim-poana izany? Manofana ahy tsy mety ianao!
Fa maninona tsy Puerto Rico no fanjakana fa Alaska sy Hawaii no fanjakana?
Fa maninona ny herintsika no tsy maintsy manaraka ny lalàna ary tsy manaraka izany ny mpampihorohoro?
Fa maninona ny zanako no manam-potoana be any am-pianarana?
Fa maninona no be dia be ny hetsika any an-tsekoly voalahatra mandritra ny asa?
Fa maninona no tsy maninona ireo sendika sivily pelaka?
Fa maninona no gaga ny olona rehetra rehefa miteny aminy aho fa miambina ny zanako manontolo?
Fa maninona aho no tsy maintsy manana fiantohana hafa amin'ny maso, vatana ary nify? Sa tsy fitsaboana daholo?
Fa maninona ny tompon-trano no manala ny tombotsoany amin'ny hetra nefa ny mpanofa tsy afaka manala ny hofan'izy ireo? Tsy manampy ny toekarena koa ny hofan-trano?
Ahoana no mampanan-karena ny mpanao politika?
Fa maninona i Al Gore no mandray fiaramanidina manokana amin'ny resaka ataony momba ny fiakaran'ny maripana amin'ny tany?
Raha ady isika, ahoana no hataon'ny indostrian'ny solika hahazoana tombony hatrany? Tsy fihenan'ny vidiny ve izany?
Ahoana no tsy ahafahantsika mijanona ny spam?
Iza no mandefa an'io spam io any amin'ny toerana tsy ahafahanao mahazo ny hevitr'ireo teny ireo? Fa maninona no alefan'izy ireo?
Maninona isika no mitazona ny miaramila amin'ny fenitra avo lenta raha ny ankamaroan'ny tafika dia olona tsy afaka mandeha any amin'ny oniversite na avy amin'ny fitaizana misy fanamby?
Fa maninona no tsy azo roahina ny mpanao politika?
Fa naninona i Indiana no nanova ny faritry ny fotoana ary mbola misy distrika sasany amin'ireo faritra hafa?
Maninona raha atambatra amin'ny tranombokin'ny sekoly ambaratonga faharoa ny tranombokim-panjakana ary hitsimpona vola be?
Fa maninona no lasa mora ny mpanao heloka bevava fotsy rehefa mangalatra mihoatra ny olon-dratsy?
Tsy filokana ny tsenambola?
Fa maninona aho no tsy maintsy mandeha any amin'ny bar mba hahazoana daty? Moa ve tsy misy vehivavy mpitovo mihantona ao amin'ny Border?
Fa maninona ny Starbucks sy ny sisintany no tsy manana Ladies Night?
Fa maninona no tsy misy tolotra isan-trano intsony? (ohatra: drycleaning)
Maninona raha mandrara ny valizy amin'ny fiaramanidina?
Fa maninona ny mpitondra fivavahana no tsy mijoro ambony kokoa rehefa manevateva ny mpanara-dia azy?
Fa maninona i Frantsa no manana toby nokleary betsaka kokoa noho i Etazonia?
Maninona isika no tsy afaka mandefa ny fako nokleary eny amin'ny habakabaka?
Fa maninona no tsy ara-dalàna ny hemp? Mitombo haingana kokoa noho ny hazo izy io, matanjaka kokoa ary tsy mahadomelina.
Fa maninona i Tommy Chong no niditra am-ponja noho ny fampiasana zava-mahadomelina, fa i Rush Limbaugh dia mbola ao amin'ny radio ihany rehefa avy nanao zava-mahadomelina tsy ara-dalàna?
Ahoana no mahalasa lafo ny entana any amin'ny fivarotana fivarotana? Mety kokoa raha tsy mandoa be aho.
Fa maninona no miantsoantso momba ny vidin'ny lasantsy isika fa mandoa 3.50 $ ho an'ny Grande Mocha ao amin'ny Starbucks. (Mmmmmm.)
Fa maninona no tsy ny fiaran'izy ireo irery? Olona iray monja no hitako isaky ny fiara handeha hiasa.
Fa maninona no tsara tarehy be ny mpanao gazety amin'ny fahita lavitra?
Fa maninona no any Etazonia ihany ny matavy loatra?
Fa maninona no azonao atao refy habe amin'ny 49 cents fanampiny, nefa tsy afaka mandanjalanja ianao ka tsy hitahiry 49 cents?
Raha tsara ho anao ny fampihetseham-batana, ahoana no tsy ahafahako mandeha na mitaingina bisikileta any am-piasana?
Fa maninona no tsy maintsy mifidy ho an'ny olona, ​​fa tsy afaka mifidy manohitra olona iray?
Fa maninona no sarotra be amintsika ny manisa vato?
Maninona aho no tsy mahazo Grande Mocha amin'ny Sarimihetsika?
Maninona isika no mandinika tsara izay lazain'ny mpisehatra nefa mody mitady fivelomana fotsiny?
Fa maninona aho no mamaky lahatsoratra nosoratan'ny bandy manana diplaoma momba ny haitao momba ny teknolojia fa tsy ny famakiana ny bilaogin'ilay tovolahy mivelona amin'ny teknolojia?
Fa maninona no tsy mahazo asa ilay bandy mifoha maraina be ka mangataka amiko dolara isan'andro handeha hiasa?
Maninona no tsy manome serivisy ho an'ny olona misotro be loatra ny fisotroana?
Ahoana no tsy ahafahantsika mamerina mandamina ny lakile amin'ny klavier mba hahomby amin'ny fanoratana haingana?
Raha mamono ny solosainanao ny vovoka, ahoana no tsy hisian'ny fanivanana hanovana?
Fa maninona ny rafitra miasa no mora vidy kokoa noho ny programa birao?
Ahoana no tsy nanamboaran'izy ireo mpanonta pirinty miaraka amin'ny kapila mafy sy router?
Fa maninona no tsy noforonin-dry zareo ny DVD hampandeha ny famaritana avo lenta?
Maninona ny zanako no tsy afaka mivavaka amin'ny feo avo any an-tsekoly nefa zon'ny lalàm-panorenana ny fahalalahana mivavaka?
Fa maninona no tsy takatry ny olona fa ny hetra ambany dia mitondra fidiram-bola bebe kokoa?
Fa maninona ny orinasam-pitaterana an'habakabaka sasany tsy afaka manana fiaramanidina miainga fotsiny rehefa feno ny toerana fa tsy amin'ny fandaharam-potoana?
Fa maninona no lafo kokoa ny vidin'ny tapakilan'ny fiaramanidina rehefa manakaiky ny ora fiaingana? Fa maninona no tsy mora kokoa?
Ahoana no ahafahako misoratra anarana amin'ny fandoavam-bola amin'ny Internet amin'ny ankamaroan'ny toerana, saingy tsy afaka manafoana azy amin'ny Internet aho?
Maninona ny mpikarakara finday no tsy manome anao ny haben'ny fotoana naha-mpanjifany anao?
Fa maninona no tsy azo soloina ny keyboard sy ny totozy tariby?
Fa maninona no tsy maintsy manana fiantohana fiara ny tsirairay? Maninona aho no tsy afaka manana tahirim-piantohana fotsiny?
Fa maninona aho isaky ny mandeha ny fetra hafainganam-pandeha, ny hafa rehetra dia hafainganam-pandeha… fa isaky ny mandeha haingana aho dia voasarika?
Maninona ny orinasa no tsy manome trosa sy fampindramam-bola ho an'ny mpiasa manokana?
Fa maninona ireo nahazo diplaoma amin'ny anjerimanontolo marobe no tsy miasa mihitsy amin'ny sehatra ananany mari-pahaizana?
Ahoana no tsy ahazoan'ny olona mari-pahaizana momba ny 'ora voatondro' amin'ny asa na indostria?
Fa maninona no PETA no mampatory ny biby?
Fa maninona no miady amin'ny kianja filalaovam-baolina ny olona fa tsy tranombakoka?
Fa maninona ireo andriana ratsy manana fihenam-bidy ambony no tsy voaroaka ary mifona ny olona am-pitoeran'izy ireo?
Ahoana no ahatongavan'ny orinasa rehefa mihalehibe izy ireo?
Fa maninona rehefa mitombo ny internet, mila mianatra fiteny sy teknolojia bebe kokoa aho fa tsy latsak'izany?
Ahoana ny Yahoo !, Google, Microsoft, Monster, ADP, na Careerbuilder tsy nanolotra $ 1 tapitrisa dolara ho ahy Calculator fandoavana mbola?
[Ampidiro eto ny fanontanianao]
Fanamarihana: Ny hevitra ho an'ity lisitra ity dia avy ProBlogger ary niditra tao amin'ny azy ity lahatsoratra ity Tetikasa fanoratana vondrona ho an'ny lisitra.
Computing Computing, toy ny Minority Report
Tsy misy fifandraisana, Miala tsiny!
Aug 18, 2006 amin'ny 8: 26 AM
tena nahatezitra be….
18 Aogositra 2006 amin'ny 12:44 PM
Lisitra tsara - mametraka fanontaniana tsara be ianao. Tsy mampaninona anao ve raha mindrana roa amin'izy ireo izahay hanao fanazaran-tena amin'ny Your Cre8tivity?
Aug 21, 2006 amin'ny 2: 18 AM
14. Fa maninona no antoko lehibe 2 fotsiny no any Etazonia?
Manana azy ireo isika satria mpandresy no mandray ny fifidianana rehetra. Ny Eoropeana dia manana rafitra hafa tanteraka amin'ny fifidianana azy, izay manohana ny antoko maro sy ny governemanta iraisana.
28. Fa maninona no lafo kokoa ny voankazo noho ny poti-ovy? Heck, maniry eny ambonin'ny hazo izy!
Ny ankamaroan'ny vidin'ny voankazo vaovao dia vokatry ny fahasimbana. Ny ovy maniry amin'ny tany ary mora vidy tokoa.
36. Fa maninona no tsy fanjakana i Puerto Rico fa i Alaska sy i Hawaii?
Ny vahoaka ao Puerto Rico dia mifidy ny tsy ho lasa Fanjakana.
37. Fa maninona ny herintsika no tsy maintsy manaraka ny lalàna sy ny mpampihorohoro?
Antsoina hoe mpampihorohoro izy ireo satria tsy manaraka ny fitsipiky ny ady tany.
43. Fa maninona ny tompon-trano no manala ny tombotsoany amin'ny hetra nefa ny mpanofa tsy afaka manala ny hofan'izy ireo? Tsy manampy ny toekarena koa ny hofan-trano?
Misy ny fihenan'ny mpanofa?
45. Fa maninona i Al Gore no mandray fiaramanidina manokana amin'ny resaka nataony momba ny fiakaran'ny maripana amin'ny tany?
Ny ankamaroany dia noho i Al Gore izay mpihatsaravelatsihy manankarena.
49 Nahoana isika no mitazona ny miaramila amin'ny fenitra avo lenta raha ny ankamaroan'ny tafika dia olona tsy afaka mianatra any amin'ny oniversite na avy amin'ny fitaizana nisy fanamby?
Ny ankamaroan'ny miaramila dia avy amin'ny sokajin-tsaranga antonony.
53 Fa maninona no lasa mora ny olon-dratsy, rehefa mangalatra mihoatra ny olon-dratsy?
Raha izany no izy dia mety noho ny hoe A. Manana mpisolovava tsara kokoa izy ireo, ary B. tsy nametraka basy tamin'ny tavan'olona mba hahazoana izay tadiaviny.
63. Fa maninona i Tommy Chong no niditra am-ponja noho ny fampiasana zava-mahadomelina, fa i Rush Limbaugh dia mbola ao amin'ny radio ihany rehefa avy nanao zava-mahadomelina tsy ara-dalàna?
Voaroaka tany Tommy i Tommy. Fanjakana henjana tokoa i Utah. Noho izay mendrika azy, i Salt Lake no mety ho tanàna lehibe farany any Amerika izay tsy hanidiana varavarana amin'ny alina ny olona.
66. Fa maninona no tsy ny fiaran'izy ireo irery? Olona iray ihany no hitako isaky ny fiara handeha hiasa.
Fiara seza tokana no antsoina hoe moto.
70. Raha tsara ho anao ny fampihetseham-batana, ahoana no tsy ahafahako mandeha na mitaingina bisikileta handeha hiasa?
Mandeha bisikileta hiasa isan'andro aho. Raha zava-dehibe aminao ny mandeha an-tongotra na mitaingina bisikileta aminao hiasa, dia na mitady asa akaiky kokoa ny trano ianao na mifindra akaikin'ny toeram-piasanao. Tsy andraikitry ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao ny manamboatra sisin-dàlana sy lalan-bisikileta manodidina anao.
77. Fa maninona ny bara tsy manome serivisy ho an'ny olona misotro be loatra?
Betsaka raha ny tena izy no handoa taksi ho an'ny mpanjifa tsy afaka miasa, noho ny olana ara-dalàna momba ny trosa.
83. Fa maninona ny zanako no tsy mivavaka mafy any am-pianarana raha zon'ny lalàm-panorenana ny fahalalahana mivavaka?
Araka ny fahazoako ny lalàna, malalaka ny zanakao mivavaka any am-pianarana. Tsy ara-dalàna anefa ny fidiran'ny mpampianatra na famporisihana azy ireo hanao izany.
Aug 21, 2006 amin'ny 3: 44 AM
11. Fa maninona ny olon-drehetra no miteny â ?? Fisarahana amin'ny fiangonana sy ny fanjakanaâ ??? rehefa tsy ao anaty lalàm-panorenana na fanambarana ny fahaleovan-tena?
Ity no tsipika mahazatra ampiasain'ny ACLU, ary ny media libéraly dia tsy manana antony manosika hanao fanamby.
19. Ahoana no fisotroan-dronono mpanao politika alohan'ny ahafahan'ny olona ao amin'ny tafika?
Ny miaramila miaramila dia afaka misotro ronono hatramin'ny faha-37 taonany.
20. Ahoana no tsy ahafahantsika mifidy amin'ny fampiakarana ho an'ny mpanao politika?
Manana Repoblika isika izay anaovan'ny olom-boafidy ny lalàna sy lalàna fa tsy demokrasia mivantana, izay anaovan'ny filan'ny olom-pirenena mivantana fanapahana sy lalàna.
22. Fa maninona ny rano avoakako avy ao amin'ny paompy no manadio ny vilaniko, ny fidiovana ary ny fandroana?
Mipetraka any Indianapolis izaho sy ianao, ny vatantsika dia misy vatosokay betsaka, izay mamela ny tasy.
34. Fa maninona ny magazay no manana zotram-pisavana be dia be nefa mihidy ny ankamaroany?
Mampiasa ny làlana fanampiny amin'ny fotoana Krismasy izy ireo rehefa feno mpivarotra ny magazay.
38. Fa maninona ny zanako no manam-potoana be any am-pianarana?
Ka afaka manampy ny paosin'izy ireo amin'ny raharaha an-tsaha ireo ankizilahy.
40. Fa maninona no tsy misy firaisana?
Fa maninona no tsy sendika sivily ok? Afaka mahazo sendika sivily amin'ny hamster ve aho; Heveriko fa tokony hosaronan'ny drafitry ny fahasalamako izy. Ary ahoana ny Mormons polygamous azon'izy ireo atao firaisana amina vehivavy 14?
41. Fa maninona no gaga ny olon-drehetra rehefa lazaiko azy fa miambina ny zanako manontolo aho?
Toa gaga izy ireo satria ny lehilahy saika tsy nahazo ny zanany feno amin'ny fisaraham-panambadiana any Indiana. Ny fitandremana feno dia matetika no omena ny raim-pianakaviana iray rehefa efa nigadra.
44. Ahoana no mampanan-karena ny mpanao politika?
Ny ankamaroan'ny mpanao politika dia mahazo ny hareny alohan'ny hidirany amin'ny birao. Raha manankarena ny olona iray raha mbola eo amin'ny toerany, dia azo inoana fa nanao izany tamin'ny fomba tsy marina izy ireo. Ny fanontanianao angamba dia tokony hoe ?? ?? fa maninona ny olona manankarena ihany no voasintona hirotsaka hofidinaâ ???? Ny valiny dia, satria ny mpiasa miasa dia tokony ho be asa mitady fivelomana hirotsaka hofidina.
46. ​​Raha miady isika, ahoana no hanohizan'ny indostrian'ny solika ny tombony azo hatrany? Tsy izany ve ny fihenan'ny vidiny?
Ny vidin-tsolika dia voafaritry ny famatsiana sy ny tinady. Ireo orinasan-rindrambaiko dia mahazo tombony azo, izany ve ny fihenan'ny vidiny? Ny fametrahana ny vidiny dia miteraka tsy fahampiana, fivarotana ary fivarotana an-tsokosoko mainty.
50. Fa maninona no tsy azo roahina ny mpanao politika?
Afaka izy ireo, afaka madiodio amin'ny fifidianana. Ny fifidianana tao California dia nampakatra an'io tamin'ny dingana vaovao.
51. Ahoana no nanovan'ny Indiana ny faritry ny fotoana ary mbola misy ny faritra sasany amin'ireo faritra hafa?
Raha ny azoko lazaina, ny fitsangantsanganana amin'ny faritr'i Indiana dia misy ifandraisany amin'ny complexe psychoire Hoosiers toa fananana. Tsy nisy dikany tamiko ny raharaha iray manontolo.
54. Tsy filokana amin'ny tsenambola ve?
Ataoko angamba fa filokana izany, fa na ny fiampitana ny arabe aza dia filokana amin'ny endrika iray. Heveriko fa miavaka amin'ny kilalao satria tsy mifamatotra amin'ny fialamboly.
Aug 21, 2006 amin'ny 3: 50 AM
55. Fa maninona aho no tsy maintsy mandeha any amin'ny bara mba hahazoana daty? Tsy misy vehivavy tokan-tena ve manantona ny sisintany?
Reko ny vehivavy mpitovo mametraka io fanontaniana io ihany. Mieritreritra aho fa ny olana mahazo anao dia tsy misy ifandraisany amin'ny toerana tadiavinao, toy ny hoe iza no tadiavinao. Azoko an-tsaina fa matetika ianao no mihaona amin'ny vehivavy tokan-tena any amin'ny sisin-tany fa tsy izy ireo no vehivavy tadiavinao.
56. Fa maninona no tsy misy ny Night Night an'ny Starbucks sy ny sisintany?
Heveriko fa ny takarivan'ny vehivavy dia manondro ny tsy fahampian'ny saram-pananana ho an'ny vehivavy. Satria tsy mandidy anao hiditra i Starbucks, tsy hitako ny fomba hampiharana izany. Ny olona mankany amin'ny bara hisambotra satria ny alikaola dia mampihena ny fihenan'ny fiaraha-monina, ary satria ny dihy dia karazana foreplay hafahafa.
57. Fa maninona no tsy misy tolotra isan-trano intsony? (Ohatra: fanadiovana maina)
Indianapolis dia manana serivisy fanadiovana maina isan-trano. Tsy dia betsaka ireo orinasa ireo satria lafo kokoa ary amin'ny ankapobeny dia trano any avaratra ihany no ampiasainy.
60. Fa maninona i Frantsa no manana toby nokleary betsaka kokoa noho i Etazonia?
Mino aho fa misy antony marobe amin'izany. Ny tena lehibe dia noho ny tsy fahampian'ny arintany frantsay. Amin'ireo firenena mandroso, i Frantsa sy Japon ihany no tsy manana arina hamokatra herinaratra. Japoney somary phobic Atom noho ny antony mazava.
61. Nahoana isika no tsy afaka mandefa ny fako nokleary eny amin'ny habakabaka?
Ny sambo an-habakabaka indraindray dia manapoaka ny habakabaka.
62. Nahoana no tsy ara-dalàna ny hemp? Mitombo haingana kokoa noho ny hazo izy io, mahery sy tsy mahadomelina.
Tsy fantatro hoe tsy ara-dalàna ny hemp indostrialy. Toa tadidiko fa lamaody ny fitafiana hemp taona vitsivitsy lasa izay, heveriko fa angano an-tanan-dehibe ny hemp indostrialy iray manontolo.
64. Ahoana no mahalasa lafo ny entana amin'ny fivarotana fivarotana? Mety kokoa raha tsy mandoa be aho.
Mandoa vola ianao amin'ny fanamorana ny fananana ny fivarotana akaiky ny tranonao.
65. Maninona no mikiakiaka momba ny vidin'ny lasantsy isika fa mandoa 3.50 $ ho an'ny Grande Mocha ao amin'ny Starbucks. (Mmmmmm.)
Mitaingina bisikileta hiasa aho ary misotro rano. Mieritreritra aho fa sahirana ny olona noho ny fihenan'ny vidin'ny lasantsy isan'andro ary tsy azon'izy ireo ny antony.
Apr 2, 2007 amin'ny 3: 20 AM
iriko raha manana fotoana bebe kokoa hamakiana an'ity aho.
Jan 28, 2008 ao amin'ny 11: 40 AM
26. Satria tsy ny zavatra rehetra dia mety ho hita ao amin'ny Starbucks. (Mbola)
50. Satria robot tsy mety mirehitra izy ireo.
48. Ilay mob moblaogy!